Ithegi: iprofayile ye-linkin | Martech Zone
Ithegi: iprofayile ye-linkin
Kukho itoni yesiphithiphithi ngoku kwicandelo loshishino. Ndizibonile ngokwam uninzi lwamashishini amancinci achitha izixhobo zokuthengisa kulo lonke ubhubhane kunye nokutshixwa okunxulumene noko. Kwangelo xesha linye, nangona kunjalo, bendikhe ndabona ukuba amashishini ayasokola ukufumana italente kunye namava. Bendisoloko ndicebisa abantu abaninzi kumzi mveliso wam ukuba batshintshe ukugxila kweeprofayili zabo ze-LinkedIn kunye namava kwiinkampani ezinkulu. Kuzo naziphi na iingxaki zoqoqosho, iinkampani ezineepokotho ezinzulu
NgeCawa, nge-3 kaJanuwari 2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Kutshanje sabelane ngemiceli mngeni ngokuthengisa kwezentlalo - uninzi lwazo lujolise kuqeqesho olungonelanga kunye nezicwangciso. Njengakwintengiso engenayo, ukuthengisa kwezentlalo akuboneleli nje ngendlela yokuzibandakanya, kukwashiya ulwazi oluyimfuneko kwithemba lokwenza uphando lwabo. Ukuthengisa kwezentlalo kubandakanya izinto ezintathu ezithile-iprofayile yakho, ukuqinisekiswa kwentlalo kunye nokwamkelwa koontanga, kunye nokwazi ukwabelana kunye nokuzibandakanya ngokuqhubekayo kunye nethemba lakho kwiProfayili yeNtlalontle- Kanye
Le infographic evela kwi-SalesforLife ijolise kwindlela iprofayile ye-LinkedIn enokuthi yenziwe ngayo ukuze ithengiswe. Ewe, ngokoluvo lwam, yonke iprofayile ye-LinkedIn kufuneka ilungiselelwe ukuthengisa… kungenjalo kutheni uku-LinkedIn? Ixabiso lakho kumsebenzi wakho lixabiseke kuphela njengenethiwekhi yakho yobungcali. Oko kwathethi, ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi benza umonakalo ngokusebenzisa kakubi iqonga okanye ngokungasebenzisi iprofayile yabo ye-LinkedIn. Olunye uhlobo endifuna ukuluyeka